एसियामै पहिलो विमान अपहरण कांग्रेसले गरेको थियो - Nayapul Online
काठमाडौं । हाल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । हालको नेपाली कांग्रेसका गतिविधि र कार्यक्रमहरु नियाल्दा कुनै बेला कांग्रेसले पनि विमान अपहरण गरेको थियो र ? भन्दा खासगरि नयाँ पुस्तालाई अचम्म लाग्न सक्छ । कडा सुरक्षा प्रबन्ध र ज्यानै लिने सजाय हुने पञ्चायतकालको त्यो जमनामा विमान अपहरणका लागि तयार हुनु सानोतिनो हिम्मतको कुरा थिएन ।
इतिहासमै कमजोर पार्टी बनेको आक्षेपहरु यतिबेला कांग्रेसीहरु झेलिरहेका छन् तर यिनै कांग्रेसीहरुले बहादुरीका साथ २०३० तिर विमान अपरहण पनि गरेका थिए । त्यसलाई राजनितिक महत्वको घटना र एसियाकै पहिलो विमान अपहरण काण्ड पनि मानिन्छ । आर्थिकरुपमा पार्टी कमजोर भएको कारणले विमान अपहरण गर्नुपरेको कांग्रेस नेताहरु बताउछन् । त्यो घटनाले त्यसबेला नेपालसहित विश्वभर सनसनी मच्चाएको थियो ।
के भएको थियो ? Tastylia online, buy lioresal online.
विक्रम सम्वत २०३० जेठ २८ गते बिहान सवा ७ बजे तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको ९–एनएबिबी ट्विनअटर विमान काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उड्यो । विराटनगरमा अवतरणपछि केहि मिनेटको अन्तरालमा विमान काठमाडौंको लागि उड्यो । विमान क्याप्टेन आरके मानन्धरले उडाईरहेका थिए । उडेको करिब पाँच मिनेटपछि विमान ६ हजार फिटको उचाइमा थियो ।
एक्कासी दुई जना मानिस आएर चालक दलका सदस्यहरुलाई थर्काउदै कञ्चटमा रिभल्बर राखेर जहाज हाइज्याक भयो भनि घोषणा गरे । पाइलटले के मजाक गरेको भनि प्रश्न गर्दा हाइज्याकरहरुले भने, हामी कांग्रेस कार्यकर्ता हौं । हाम्रो नाममा वारेन्ट छ । तिम्रो राजाले हामीलाई धेरै सतायो । काठमाडौं जाने बित्तिकै समाउँछ । त्यसैले हामीलाई यतै कतै ओराली देऊ । विमान काठमाडौंको रुट छोडेर भारततर्फ मोडियो ।
त्यहाँ एउटा जिप पहिल्यै बसिरहेको थियो । अपहरणकारीहरुले राष्ट्र बैंकको ३० लाख पनि उनिहरुले लिएर गए अनि भारतको फारवीसगञ्जबाट जहाज यात्रुसहित सिधै विराटनगरमा आएर अवतरण भयो । पछि मात्र जहाज अपहरण परेको र राष्ट्रबैंकको ३० लाख रुपियाँ लुटिएको सूचना सबैतिर फैलियो । यो विमान अपहरण करिव २७ मिनेटमा सम्पन्न भएको थियो ।
यो घटनाका विषयमा थुप्रै गीत तथा कथा कहानी पनि बने । अपहरणकर्ताहरूले लामो समय जेल जीवन बिताए । विमान अपहरणकारीहरु ‘वसन्त भट्टराई, दुर्गा सुवेदी (पूर्व पधानन्याय न्याधिश शुसिला कार्कीका श्रीमान) र नागेन्द्र ढुंगेल थिए । यसको मुख्य योजनाकार स्व.गिरीजा प्रसाद कोईराला थिए ।संयोग नै भनौँ अपहरणको योजनासँग जोडिएका एक जना व्यक्ति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वेला विक्रम सम्वत २०७२ साल फागुन मा यो विमान अर्घाखाँचीमा दुर्घटनामा परेर भग्नावशेषमा परिणत भयो । त्यही भग्नावशेष यतिवेला काठमाडौंको सुन्दरीजलस्थित बिपी संग्रहालयको मुख्य आकर्षण पनि बनेको छ ।